एनसेलले ल्यायो ‘भ्यालेन्टाइन अफर’, कसरी सुचारू गर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
एनसेलले ल्यायो ‘भ्यालेन्टाइन अफर’, कसरी सुचारू गर्ने ?
काठमाडौंः एनसेलले ‘भ्यालेन्टाइन अफर’ ल्याएको छ । एनसेलका सबै प्रिपेड ग्राहकले आगामी भ्यालेन्टाइन सिजनमा आफ्ना प्रियजनसँग असिमित कुराकानी गर्दै फाइदा लिन सक्ने छन् ।
नजिकिँदै गरेको प्रणय दिवसको अवसरमा एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि ‘अझै नजिकिन्छ सम्बन्ध’ योजना अन्तर्गत ‘भ्यालेन्टाइन अफर’ ल्याएको हो । यो अफरमा ग्राहकले मात्र १०० (कर सहित मात्र १२७.६९) मा ७०० मिनेट अन नेट टक टाइम रहेको साप्ताहिक भ्वाइस प्याकको मजा लिन सक्नेछन् ।
यो भ्यालेन्टाइन अफर यही शुक्रबार (माघ २४) देखि लागू हुनेछ र ३ महिनासम्म संचालनमा रहनेछ । यस भ्यालेन्टाइन महिनाको अवसरमा संचालनमा ल्याउन लागिएको यो अफरअन्तर्गत ग्राहकले कर सहित मात्र १८ पैसा प्रतिमिनेटमा कुरा गर्न सक्नेछन् ।
यो अफरको साप्ताहिक प्याक सुचारु गरेपछि ७ दिन सम्म समयावधि रहनेछ । ग्राहकले एस्टिक्स १७११८ एस्टिक्स २ एस्टिक्स ३ ह्यास डायल गरी प्राप्त जानकारी अनुसार प्याक सुचारु गर्न सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस प्रणय दिवसमा ‘सौराहा खाना महोत्सव’, पर्यटकलाई १५ प्रतिशत छुट
ट्याग्स: ‘भ्यालेन्टाइन अफर’, एनसेल, प्रणय दिवस